“Go’aanka aan ugu soo biiray PSG waxa uu ahaa…” – Lionel Messi – Gool FM
“Go’aanka aan ugu soo biiray PSG waxa uu ahaa…” – Lionel Messi
(Paris) 07 Okt 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa si toos ah wareysi u bixiyay markii ugu horreysay tan iyo safashadiisii ugu horreysay ee kooxda reer France isagoo si gaar ah uga hadlay go’aankii uu ugu soo biiray PSG.
Messi ayaa sheegay inuu qaatay go’aan sax ah markii uu kusoo biiray Paris isagoo tilmaamay inuusan ka shallaayi doonin go’aankaas kaddib wareysi uu siiyay majaladda France Football kaasoo si toos ah loo baahin doona Sabtida oo ay taariikhdu tahay 9-ka bishan October.
“Ma aanan qaadan go’aan qaldan si aan ugu soo biiro PSG” ayay ahayd weedha kabtanka xulka qaranka Argentina ee ay majaladda Faransiiska kasoo baxda cinwaanka uga dhigtay wareysiga ay balan qaadday inay soo fasaxeyso sabtida.
Halyeyga Barcelona ayaa si tartiib ah ku bilaabay nolosha garoonka Parc des Princess isagoo dhaliyay gool qura kaddib shan ciyaar oo uu u saftay PSG waxaana uu goob-joog u ahaa guuldarradii kasoo gaartay Rennes toddobaadkan horraantiisii markaas oo kooxdiisa lagu garaacay 2-0.
Dad aad ugu dhow Paul Pogba oo ogaaday go'aanka mustaqbalkiisa Man United xilli qandaraaskiisu uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan